Posted on - 2020-10-09 11:32:02
အလုပ်ပြီးမြောက်မှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ပေးမယ့် အလေ့အထနည်းလမ်းကောင်း (၉) ခု
“ဒီထက်ပိုပြီး အလုပ်တွင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ အမြဲတမ်းမေးဖြစ်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ အလုပ်တွင်ဖို့အတွက် အကြံပေးချက်တွေနည်းလမ်းတွေ မရေတွက်နိုင်အောင်ရှိပေမယ့်လို့ အင်မတန်ထိရောက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁. အာရုံလွင့်ပါးမှု၊ ကြားဖြတ်အနှောင့်အယှက်တွေကို လျှော့ချပါ။
အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ကိုအာရုံလွင့်ပါးစေမယ့်အရာတွေက လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာလေးခဏသုံးတာမျိုး အင်တာနက်သုံးတာမျိုးတို့ လုပ်ချင်မိနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ပဲလုပ်ပါ။ ကိုယ့်စည်းကိုယ်ထားပြီး ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း နေ့စဉ်ကျင့်ကြံနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ အာရုံလွင့်ပါးစရာတွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လျှော့ချနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ပုံမှန်ထက်အလုပ်ပိုတွင်စေပါတယ်။
၂. ရုံးကိုစောစောရောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
လူနေမှုထူထပ်လှတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်တို့အနေနဲ့ အလုပ်ကို သူများတွေထက် စောစောသွားတဲ့အခါ ယာဉ်ကြောပိတ် တဲ့ဒဏ်မခံရတော့ဘဲ အချိန်ပိုထွက်လာသလို ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။အဲဒီလို အချိန်ပိုထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွင်မှုနှုန်းကို တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်စေရုံတင်မကဘဲ ကိုယ့်အလုပ်နယ်ပယ်မှာ လစာအကောင်းဆုံးရသူ၊ အလုပ်ကို ခရီးအပေါက်မြောက်ဆုံးလုပ်နိုင်သူဖြစ်လာအောင်လည်း အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။
၃. နောက်တစ်နေ့အတွက် တစ်ညကြိုတင်အစီအစဉ်ချပါ။
ဒီအလေ့အထကတော့ အရမ်းကိုပဓာနကျတဲ့ အလေ့အထပါပဲ။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ အချိန် ၁၅ မိနစ်ပေးပြီး နောက်တစ်နေ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို စာရင်းလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် မနက်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ်က ရှေ့ကိုရောက်နေမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုစာရင်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တွေကိုရွေးပြီး ဘေးမှာအမှတ်အသားနဲ့မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေအောင်မြင်ဖို့ တွန်းပို့ပေးမယ့် မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဆိုတာ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့။
၄. နေ့လယ်စာကို ရုံးအပြင်ထွက်စားပါ။
ဒါကတော့ အသေးအမွှားလေးလို့ထင်ရပေမယ့် အလုပ်မှာကျန်တဲ့နေ့တစ်ဝက်တစ်လျှောက် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အင်မတန်မှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ နေ့လယ်စာကို ရုံးအပြင်မှာထွက်စားတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ပြန်လည်သစ်လွင်စေသလို လုပ်ငန်းခွင်ထဲပြန်ဝင်ရတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။
၅. ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို အချိန်ပြည့်မျက်စိရှေ့မှာထားပါ။
ကိုယ့်အတွက် အရမ်းကိုကြီးမားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ချမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် အဲဒီရည်မှန်းချက်တွေကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ အချိန်ပြည့်ထားပါ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို တစ်နေ့တာလုံး ကြိမ်ဖန်ပေါင်းများစွာမြင်ရမယ့် နေရာမျိုးတွေမှာ မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေကို အဲဒီလိုပြန်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ လုပ်စရာရှိတာကို ပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန် အားတွေ မြင့်တက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၆. အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံမှဆိုတဲ့အတွေးကို စွန့်လွှတ်ပါ။
လူအများစုအနေနဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုခြောက်ပြစ်ကင်းနေစေချင်တဲ့စိတ်ရှိတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ လက်တွေ့မှာတော့ ဘယ်အရာမှ ခြောက်ပြစ်ကင်းမနေနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် အချိန်ကုန်ခံနေမယ့်အစား လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးသာလုပ်လိုက်ပါ။ နောက်တော့မှ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်တာမို့ အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းမွန်ပြီးမြောက်အောင် အရင်လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၇. တခြားသူတွေကို တုံ့ပြန်နေခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်မသွားအောင် သတိပြုပါ။
ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ဖုန်းတွေ အီးမေးလ်တွေကို လက်ခဖြေကြားပြီး တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးတဲ့အခါ ကိုယ်တိတိပပလုပ်နိုင်တာက အဲဒါလေးတွေပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ပဲ တစ်နေကုန်မသွားပါစေနဲ့။ တစ်နေ့တာစတင်တိုင်း ကိုယ့်ဘက်ကအရင်လှုပ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်ချပြီး အစီအစဉ်ချထားတဲ့အတိုင်း အကောင်းဆုံးလုပ်သွားပါ။ အီးမေးလ်၊ အသံမေးလ် သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ရောက်လာတဲ့အခါ တက်လာတဲ့နိုတီတွေကို ဘယ်သူကမှ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်မနေနိုင်ကြပါဘူး။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ နိုတီတွေကိုပိတ်ထားပြီး အီးမေးလ်တွေနဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေကိုစစ်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ထားပါ။
၈. မိနစ် ၉၀ အပိုင်းအခြားနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါ။
မိနစ် ၉၀ ထက်မကျော်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ထိပ်တန်းလုပ်ဆောင်သူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ မိနစ် ၉၀ ထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်သူတွေထက် အလုပ်ပိုတွင်ကြတာကို သုတေသီတွေက တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အဲဒီလို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသူတွေဟာ တစ်နေ့မှာ ၄ နာရီခွဲထက်မပိုဘဲ အလုပ်လုပ်တတ်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသတဲ့။
၉. ကိုယ့်မျက်လုံးကို အနားပေးပါ။
ကိုယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သစ်ပင်ပန်းမန်တို့လိုမျိုး မျက်စိပသာဒရှိတဲ့အရာတွေ ဆင်ယင်ထားရှိတာဟာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲက နေရာလွတ်တွေမှာ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ၊ ပန်းအိုးလေးတွေအပြင် ကိုယ့်ကိုစိတ်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေနဲ့ ဆင်ယင်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အလုပ်ကို ခရီးအပေါက်မြောက်ဆုံးလုပ်နိုင်သူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်လိုခံစားရလဲ? ကိုယ့်ရဲ့အချိန်အများစုကို ဘယ်လိုအလုပ်တွေမှာ အသုံးချနေသလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး လုပ်ဆောင်စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့သူဖြစ်အောင် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပါ။